नेपाल आज | उपनिर्वाचन २०७६ : सबै स्थानको मतपरिणाम सार्वजनिक, कसले कहाँ जित्याे?
उपनिर्वाचन २०७६ : सबै स्थानको मतपरिणाम सार्वजनिक, कसले कहाँ जित्याे?
काठमाडौं– ३७ जिल्लाका ५२ रिक्त पदका लागि भएको मतदानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अग्रस्थान बनाएको छ भने दोस्रो स्थानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस रहेको छ ।प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कास्की क्षेत्रनम्बर २ सहित ३० स्थानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार बिजयी भएका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर र धरानकै वडा नम्बर ७ को वडाध्यक्षको नितजा सार्वजनिक भएसँगै उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको हाे। धरानमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तिलक राई २६,७०९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपाका प्रकाश राईले २३,९१४ मत पाए ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेले १५ हजार ९ सय ९१ मत प्राप्त गरे ।दाङ क्षेत्र नम्बर–३ को ख को उपचुनावमा नेकपाले जीत हात पारेको छ । नेकपाकी बिमलाकुमारी खत्री २४ हजार २८६ मत ल्याएर विजयी भएकी हुन् ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका केशवराज शर्माले १९ हजार १८२ मत ल्याए । यसअघि २०७४ सालको चुनावमा उक्त क्षेत्र नेकपाले जितेको थियो ।प्रदेशसभा अन्तर्गत बागलुङ २ को ‘ख’ मा वाम गठवन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । वाम गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिम विक्रम शाही ११ हजार २ सय ३५ मतसहित विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जीत शेरचनले ९ हजार १ सय ३८ मत पाए ।
भक्तपुरको प्रदेश १ ख मा नेपाली कांग्रेसले जितको छ । यसअघिको चुनावमा नेकपाले जितेको उक्त क्षेत्रमा कांग्रेसले जीत हात पारेको हो ।अन्तिम मत परिणामअनुसार कांग्रेस उम्मेदवार कृष्ण भँडेलले १३ हजार ४ सय ४९ मत पाएका छन् । उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार देवीप्रसाद ढकालले ११ हजार २ सय ६ मत पाएका छन् । यस अघि यो क्षेत्र नेकपाले जितेको थियो ।
उपुचनाव भएका ३ गाउँपालिका अध्यक्ष र १ उपाध्यक्षमध्ये गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने एक गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपाले जितेको छ ।
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपाले जीत हात पारेको छ ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपाका तेजवहादुर पोखरेल निर्वाचित भएका छन् भने महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका
अध्यक्षमा नेकपाका विक्रम चौधरी निर्वाचित भएका छन् ।
कस–कसले जिते ?